Waaheen Media Group » 2013 » June » 01
Browse:Home 2013 June 01
Daily Archives: 5:32 pm
Hargaysa(waaheen)-Xulka Gobalka Gabiley ayaa si weyn loogu soo Dhweyay Galabta Caasimada magaalada hargaysa, iyada oo ay soo dhweyeen Xubno kamida dawlada iyo wasiirka ciyaaraha oo ay waheliyaan agaasimaha guud iyo… Read more »
Munaasibad Qado Sharaf ah oo Magaalada Hargeysa loogu Sameeyey Kooxda Kubada Cagta Ee Gobolka Saaxil.
Hargeysa(Waaheen)-munaasibad balaadhan oo qado sharaf ah ayaa maanta magaalada hargeysa loogu sameeyey kooxda kubada cagta ee gobolka saaxil,munaasibadaasi waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha Qorsheynta Qaranka Dr Sacad Cali… Read more »
Taariikhda Urur-diimeedka Xisbullah ee lubnaan
Taariikhda Urur-diimeedka Xisbullah ee lubnaan W/Q: Cali Cabdi Coomay Urur-diimeedkan shiicada ah ee Xisbullah waxa la aasaasay sannadkii 1982-kii. Magacii ugu horeeyey ee ay la baxeen wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqa wax-iska-caabinta…. Read more »
Wasiirka Duulista Somaliland oo ka hadlay dismaha Madaar, Arimo kale
Wasiirka Duulista Iyo Hawada Somaliland Oo Ka Hadlay Halka Ay Marayso Hawsha Dhismaha Madaarka,Go,aankii Lagu Joojiyey Duulimaadyada Qaramada Midoobay Iyo Arimo Kale+Sawiro Hargeysa(Waaheen):-wasiirka wasaarada duulista iyo hawada Somaliland Maxamuud Xaashi… Read more »
INTA WASIIR XIRSI GABAYGIISII LAGA JAWAABAYO MAXAA LOOGA GABYI WAAY AY TAHRIIBKA IYO DHIBAATOOYINKA WAAWEYN EE KA JIRA DALKA
Waxaad in badan aad ku arkaysaa warbaahinta kala duwan dad badan oo u jawaabayo gabaygii xirsi markaasna waad la yaabaysaa dadkaas iyo macno daradooda iyo siday u ilaabeen inay dadkooda/dalkoodii… Read more »
Xisbiga Wadani oo xukuumada Somaliland ku dhaliilay ka qaybgalka shirka Neiyrob
SIYAASADII ARRIMAHA DIBADDA EE XUKUUMADDA KULMIYE
MA WAXAY ISKU BEDDASHAY MAALGASHI LAGU DHAAWACO QARANIMADII SOMALILAND Xisbiga WADDANI wuxu hore uga hadlay in talada iyo itijaaha siyaasadda Arrimaha Dibaddu aanu ka maarmayn talo Qaran, la hufay, lana… Read more »
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Somaliland oo Golaha Wakiiladda Warbixin ka jeediyey.(Halkan ka dhagayso)
Isku aad ka Ciyaaraha Gobolada Somaliland
Hargaysa(waaheen)-Wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa maanta ku dhawaqday natiijada kooxaha ciyaaraha Somalilandn. Hadaba agaasimaha guud ee wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa sheegay inay sandkan rabaan inay si fiican… Read more »